निद्रा र फ्लुबिच यस्तो सम्बन्ध, उमेर अनुसार कति घन्टा सुत्ने?
माघ २८, २०७४ आइतवार १८:१८:५४ प्रकाशित
एजेन्सी- अमेरिका र युरोपसहित संसारका धेरै भागमा, फ्लु धेरै घातक रोग बनेको छ। अमेरिकामा हालसालै फ्लुका कारण ८५ वयस्क र ३० बच्चाको मृत्यु भइसकेको छ। र यो लगातार फैलिरहेको छ।
वैज्ञानिकहरूले भनेका छन्, 'फ्लुको उपचार भ्याक्सिनले मात्र सम्भव छैन, यसका लागि पर्याप्त निद्रा पनि आवश्यक पर्छ।' उनीहरुका अनुसार मानिसहरूले निद्रा पूरा गर्छन् भने फ्लुबाट बच्न सकिन्छ।
निद्रा पूरा नहुनु खतरा
विभिन्न अध्ययनले निद्रा पूरा नहुनेहरुमा फ्लुको भ्याक्सिन प्रभावकारी नभएको देखाएको छन्। यसबाहेक, निद्रा नपुग्नेहरुलाई मधुमेह र मुटुरोगको जोखिम पनि रहन्छ। विशेषज्ञ क्रिस ब्रान्टनर भन्छन्, 'सुत्नु भनेको ब्याट्री चार्ज गर्नुजस्तो हो। निद्राले शरीरलाई चार्ज गर्छ र फ्लुको उपचारका लागि महत्त्वपूर्ण छ।' उनका अनुसार एक-तिहाई अमेरिकी डाक्टरको सल्लाह बमोजिम कम्तिमा सात घन्टा पनि निदाउँदैनन्।
उमेर अनुसार कति घन्टा सुत्ने?
ब्रान्टनरले फ्लुबाट बच्न धेरैले बारम्बार हात धुने कुरा गरे पनि कसैले निद्रा पूरा गर्नुपर्छ भन्नेबारे नसोचेको बताउँछन्। उनका अनुसार फ्लुबाट बच्न ७ देखि ९ घन्टाको निद्रा आवश्यक छ।
अमेरिकाको नेसनल स्लिप फाउन्डेसनका अनुसार ६-१३ वर्षका बच्चालाई ९ देखि ११ घन्टाको निद्रा चाहिन्छ। किशोर अवस्थामा ८ देखि १० घन्टा सुत्नु उपयुक्त हुन्छ। यस्तै, १८ वर्षमाथिमा मानिसले दैनिक ७ देखि ९ घन्टा निदाउनुपर्छ। विशेषज्ञहरु भन्छन्, 'एचथ्रीएनटु इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न निद्राको यो नियम पालना गर्नु जरुरी छ। किनभने फ्लुको भ्याक्सिन ३४ प्रतिशतमात्र प्रभावकारी साबित हुने गरेको तथ्यांकले नै देखाउँछ।
निद्राले प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ
निद्राले शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि गर्ने र त्यसले फ्लुसँग लड्न सहयोग गर्ने विशेषज्ञहरु बताउँछन्। निद्राको बेला शरीरले 'टि सेल्स' उत्पन्न गर्ने र त्यसले संक्रमित कोशिकालाई मार्ने काम गर्ने वैज्ञानिकहरुको दाबी छ।
साथै, शरीरको प्रतिरोधी क्षमताले विशेष किसिमको प्रोटिन प्रवाह गर्छ जसले संक्रमित शरीरलाई चाँडो निको हुन सहयोग पुर्या्उछ। तर, निद्रा पूरा भएन भने यस प्रकारको प्रोटिन र टि सेल्सको मात्र कम हुन्छ र रोगले चाँडै आक्रमण गर्न सक्छ।
१. स्वास्थ्यमा समस्या – ३: कर्मचारी सरुवामा आशंका गर्ने अवस्था
२. वीरका न्युरोसर्जन डा अधिकारीलाई कारबाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी
३. अमेरिकी अस्पतालमा बन्दुकधारीको आक्रमण, एक डाक्टरसहित चारको मृत्यु
४. बच्चालाई मोबाइल हेर्नबाट कसरी सीमित गर्ने? कति सहज?
५. बागलुङ : स्वास्थ्यमा असर गरेको भन्दै पानीपुरी र चटपट निषेध
६. डा केसी अस्पतालबाट डिस्चार्ज
७. सप्तरीका १ सय ६४ मध्ये ४५ वटा वडा स्वास्थ्य संस्था विहिन
८. हेल्थ असिस्टेन्ट २० दिनदेखि बेपत्ता
९. बीपीग्राम स्वास्थ्य उपचार केन्द्र ५ वर्षमै बन्द, सरकारको करोडौं रकम पानीमा
१०. अभिभावकको आपसी रिस जब बालबालिकामाथि पोखिन्छ